September 13, 2021 – သုတရသ
“ဆံပငျပါးသူ ဆံပငျမပေါကျသူမြားအတှကျ သဘာဝဆေးနညျးကောငျး”
Sep 13, 2021 Shwe Myanmar
Zawgyi ဆံပင်ပေါက်ဆေး သဘာဝဆေးနည်း ကြက်သံ အထွက်မြန်တာ ဆံကေသာ ယခင်က မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများက ကျွန်တော်ကိုတွေ့ပါလျှင် ပြောင်ကြီးတဲ့..။ အချို့က ပြောင်ပြောင်တဲ့။ လူကြားသူကြားလည်း မရှောင်တော့..။ ယခုကျွန်တော်ကို ပြောင်ကြီးလို့ မခေါ်ကြတော့ပါ။ ဆေးနည်း ကြက်သွန်နီနဲ့ သံပုရာသီးပဲ…
“ဖောကျပွနျနတေဲ့ ခဈြသူကောငျလေး ပွနျရောကျလာဖို့ ဘိုးတျောဆီသှားလိုကျတဲ့ကောငျမလေးရဲ့အဖွဈ”
ကျွန်မ နဲ့ချစ် သူဟာ လက်တွဲလာတာ ၄ နှစ် ရှိပါပြီ။ ဒီနှစ်ကုန်ရင် လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ အလိုလိုနေရင်း ” ငါတို့လမ်းခွဲကြရအောင် သူက ကျွန်မကို မချစ်တော့ပါဘူး၊ အခု သူကအသစ်တွေ့နေပါပြီ လက်တွဲလာတဲ့…
“ဆေးမသောကျပဲ ဆီးခြိုရောဂါ ပြောကျတဲ့ သဘာဝဆေးနညျး”
Zawgyi ဟင်းလျှာအဖြစ်ချက်စား ဆေးဖက်ဝင်သလားမမေးနဲ့ ရုံးပတီသီး ဆေးမသောက်ပဲ ပျောက်တယ်ရယ်လို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် ဒီ သဘာဝ နည်းလမ်းက ဆီးချိုရောဂါ ရှိသူများအတွက် အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးထဲက ကုထုံးနည်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးသာက်နေရာ သူများလည်း…
“ဆေးနညျးပေါငျး ၁၀၀၀ ပေါငျးခြုပျ ”
Zawgyi ချောင်းဆိုးလျှင်….ခရေပွင့်ကိုတညလုံးရေစိမ်၊ နံနက်တွင်း ထိုရေကိုစစ်၍သောက်ပါ ၊ပျောက်၏ ။ ရင်ပြည့်ရင်ကယ် ..ကြက်ဟင်းခါးသက်စောင့်ဆေးကို နှမ်းဆီ –ပရုပ်ဆီဖြူ ဖြင့်ဖျော်၍ ရင်မှအသာအယာသပ်ချပါ ။ နှာပိတ်သော်…..ကြိတ်မှန်ရွက် ခွေးသေးပန်းရွက် နှစ်ပါးကြိတ် ၊ ရှိန်းခိုနဲနဲထည့် ၊ ငယ်ထိပ်မှနှာခေါင်းအထိဆေးအရည်နှင့်ဆွဲပေးပါ…
“အဲ့ဒါကွောငျ့ တရားဝငျ ယူပွီးသှားကွတဲ့ ယောကျြားနဲ့ မိနျးမကို လငျမယားလို့ ချေါတာပါ…”
Zawgyi လင်နဲ့မယားမှာ အပြန်အလှန် တင်ရမဲ့ကျေးဇူးတွေရှိကြတယ် အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ အိမ်ရှင်မ အမျိုးသမီးဟာ အပျိုဘဝကထက်ပိုလှနေတယ်၊ ပိုတင့်တယ်နေတယ်ဆိုရင် အဲဒီ အမျိုးသမီးဟာ ခင်ပွန်းကောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားရလို့ လို့ ဆိုကြတယ်။ အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အမျိုးသားဟာ လူပျိုဘဝတုန်းကထက်ပိုပြီး ခန့်ညားတင့်တယ်နေတယ်ဆိုရင်…
“ခွထေောကျ ပုံစံက ပွောပွနတေဲ့ လူတှရေဲ့အကွောငျး…”
Zawgyi ခြေထောက် ပုံစံက ပြောပြနေတဲ့ လူတွေရဲ့အကြောင်း… လူတစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့်စရိုက်နဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို ခြေထောက်တွေ ကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းလို့ရတယ်ဆိုရင် သင် ယုံပါ့မလား …? ဒါဟာ ရှေးကတည်းက ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တဲ့ နည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အထိုက်အလျောက်လည်း…
“ဆောငျးတှငျးမှာအဖွဈမြားတဲ့ အသားအရမှေဲခွောကျပကျြစီးမှုကို ကွိုတငျကာကှယျနိငျမယျ့နညျးလမျးကောငျးမြား”
Zawgyi ဆောင်းတွင်းမှာအဖြစ်များတဲ့ အသားအရေမွဲခြောက်ပျက်စီးမှုကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိင်မယ့်နည်းလမ်းကောင်းများ…. အေးစက်ခြောက်သွေ့တဲ့ ဆောင်းရာသီကာလဟာ အသားအရေပျက်စီးဖို့ ရာခိုင်နှုန်းအများဆုံး ရာသီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းရာသီမှာ အသားအရေခြောက်သွေ့ပျက်စီးခြင်း အရေပြားအက်ကွဲခြင်းတွေကဲ့သို့ အရေပြားပြဿနာတွေက အမျိုးသမီးတွေသာမက အမျိုးသားတွေပါ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ယခုလိုဆောင်းဦးကာလမှစပြီး ဆောင်းရာသီတစ်လျောက်လုံးမှာ အသားအရေထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို…
“သ ကျ ရှ ညျကနျြးမာဖို့အတှကျအ ရေး အ ကွီး ဆုံး အ ခြ ကျ မြား”
Zawgyi သက်ရှည်ကျန်းမာဖို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးအချက်များ၁။ညအိပ်ယာဝင်ခါနီးတိုင်းသွားတိုက်ပါ။သွားတိုက်ပြီးသည်နှင့်ဘာမျှမစားသင့်တော့ပါ။ခံတွင်းသန့်လျင်ရောဂါအမျိုးအစား ၇၀ကအလိုလိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သည်။ခံတွင်းမသန့်ရှင်းသည်နှင့်ရောဂါအမျိုအစား၇၀ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးသားဖြစ်သည်၂။အသက်ကြီးသည်အထိသွားခိုင်မှသက်ရှည်ကျန်းမာနိုင်သည်။ငယ်စဉ်ကတည်းကသွားကျန်းမာကြံ့ခိုင်အောင် အမာစာများတအားမစားပါနှင့်အချိုလျော့စားပါ။ခံတွင်းသန့်ရှင်းဖို့အမြဲဂရုစိုက်ပါ၃။မိမိစိတ်တွင်မေတ္တာတရားကိုသာလက်ခံပါ။စိတ်ချမ်းသာစရာကိုသာတွေးပါ၎။သူတစ်ပါးကိုပေးဖို့ရာသာတွေးပါ။ရယူဖို့ရာဘယ်တော့မှမတွေးပါနှင့် ၅။အစာစားတိုင်းကြေညက်အောင်ဝါးစားပါ၆။ကန်စွမ်းရွက်ကိုနေ့စဉ်စားပါ။ကြော်၊ပြုပ်၊ချဉ်ရည်ဟင်းချက်၊တစ်ခါတစ်ရံအရိုးကိုထန်းလျက်နှင့်ပြုပ်သောက်ပါ။ကန်စွမ်းရွက်သည်ဝမ်းဗိုက်ထဲရောက်နေသောရောဂါဖြစ်မည့်အဆိပ်မျိုးစုံကို ပယ်ဖျောက်ပေးသည်။အသားအရည်ကိုချောမွေ့လှပစေသည်။သွေးကိုသန့်ရှင်းစေသည်။အမျိုးသမီးများဓမ္မတာကိစ္စ၊သွေးဆုံး၊မီးယပ်ရောဂါမှန်သမျှကိုကောင်းအောင်ကုသပေးသည့်သဘာဝမားတော်ဖြစ်သည်။ကန်စွမ်းရိုးသည် အသက်ကြီးလျင်အလိုလိုကုန်ခန်းလာသည့်အရိုးတွင်းမှကက်ဆီယံဓါတ်ကိုပြန်ဖြည့်ပေးသည်၆။မနက်အိပ်ယာထရေနွေးဆူအောင်တည်၍‌ခေတ္တအအေးခံကာခပ်နွေးနွေးကိုတစ်ဝကြီးသောက်ပါသောက်ပြီး၄၅မိနစ်ကြာမှအစာစားပါကင်ဆာ သွေးတိုးဆီးချိုစာသောနာတာရှည်ရောဂါများကိုပျောက်ကင်းစေသကဲ့သို့မလိုအပ်သောအဆီများကိုချပေးသည်သတိပြုရမည်မှာညကတည်းကတည်ထားသောဓါတ်ဘူးထဲထည့်ထားသောရေနွေးမဖြစ်ဖို့လိုသည်။ညသိပ်ရေနွေးသည် အဆိပ်ဖြစ်သောကြောင့်မသောက်သင့်ပါ၇။တစ်ရက်တစ်ကြိမ်ကြက်သွန်ဖြူ၎တက်လောက်ကိုထမင်းနှင့်မြှုပ်စားပါ။စားနည်းမှာကြက်သွန်ဖြူ၎တက်ကိုအခွံခွါကာပြားသွားအောင်ထုပါ။အနည်းဆုံး၁၅မိနစ်ကြာအောင်စောင့်ပြီးမှ ထမင်းနှင့်မြှုပ်စားပါ။နှလုံးရောဂါသမားများနှစ်လကျော်အတွင်းသက်သာပျောက်ကင်းနိုင်သည်။များလွန်းလျင်မကောင်းပါသုံးလေးတက်ထက်ပိုမစားသင့်ပါကြက်သွန်ဖြူကိုပြားလိုက်လျင်ထွက်လာသောအစေးနှင့်ပြင်ပအောက်ဆီဂျင် လေထိသွားသောအခါကျမှဆေးဖြစ်ပြီးသွေးသန့်အောင်သွေးကျဲအောင်လုပ်ပေးနိုင်သောဓါတ်ကိုဖြစ်စေသောကြောင့်အနည်းဆုံး၁၅မိနစ်စောင့်ပြီးမှစားရခြင်းဖြစ်သည်ထိုကြက်သွန်ဖြူသည်နှလုံးသမားများစားနေသော သွေးကြဲဆေးထက်၎ဆပိုပြီးအာနိသင်ရှိကြောင်းပြင်သစ်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ပြောဖူးသည်။ကြိုတင်စားထားလျင်လေအား သွေးအားကိုကောင်းစေသည့်အပြင်သွေးကိုပါသန့်စေသောကြောင့်သွေးတိုး၊လေးဘက်နာရောဂါ လေဖြတ်ရောဂါ၊နှလုံးရေဂါများကိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ် သည်၈။တစ်ရက်လျင်ပုံမှန်ဖန်ခွက်ဖြင့်ရေ၈ခွက်ခန့်ဝင်အောင်သတိထားသောက်ပါ။ဆီးသွားချင်လျင်အောင့်မထားဘဲချက်ခြင်းသွားပါကျန်းမာခြင်းသည်အမြတ်ဆုံးလာဘ်ဟူသော ဘုရားရှင်စကားတော်ကိုဦးထိပ်ထားပြီးကျန်းမာရေးကိုရွှေငွေပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်ဘယ်သောအခါမှမလဲမိအောင်ဂရုစိုက်ပါ။အချိန်မှန်အိပ်အချိန်မှန်စားလျင်ရောဂါဖြစ်ဖို့အလွန်ခဲယဉ်းပါသည်။ကျန်းမာရေးထိခိုက်သည်နှင့် ပြည့်စုံနေသောစီးပွါးရေး၊အိမ်ထောင်ရေးပညာရေးများသည်ဘာမျှသုံးစားမရတော့သည်ကိုသတိပြုပါ။အားလုံးသက်ရည်ကျန်းမာကြပါစေမေတ္တာရှင်ရွှေပြည်သာcredit Unicode သကျရှညျကနျြးမာဖို့အတှကျအရေးအကွီးဆုံးအခကျြမြား၁။ညအိပျယာဝငျခါနီးတိုငျးသှားတိုကျပါ။သှားတိုကျပွီးသညျနှငျ့ဘာမြှမစားသငျ့တော့ပါ။ခံတှငျးသနျ့လငျြရောဂါအမြိုးအစား ၇၀ကအလိုလိုကာကှယျပွီးသားဖွဈသညျ။ခံတှငျးမသနျ့ရှငျးသညျနှငျ့ရောဂါအမြိုအစား၇၀ကိုဖိတျချေါပွီးသားဖွဈသညျ၂။အသကျကွီးသညျအထိသှားခိုငျမှသကျရှညျကနျြးမာနိုငျသညျ။ငယျစဉျကတညျးကသှားကနျြးမာကွံ့ခိုငျအောငျ…
“ဆောငျးရာသီမှာဖွဈတတျတဲ့ ခန်ဓာကိုယျပျေါက အညိုကှကျ အမဲကှကျတှပေျေါလာရတဲ့အကွောငျးအရငျး(စုနျးစုပျတာလုံးဝမဟုတျပါ)”
Zawgyi ဆောင်းရာသီမှာဖြစ်တတ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က အညိုကွက် အမဲကွက်တွေပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းအရင်း(စုန်းစုပ်တာလုံးဝမဟုတ်ပါ) ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ အညိုကွက် အမဲကွက် တွေပေါ် လာရင် တော်တော် များများက စုန်းစုပ် တယ်လို့ပြောကြလို့ ဒီပိုစ့်လေးနဲ့ အသိပေး အပ်ပါတယ်နော်…..။ “အရေ ပြားပေါ်မှာ အညို…
“မီးအပူ ၊ ဆီအပူ လောငျတတျတဲ့ အိမျရှငျမတှအေတှကျ အမာရှတျမကနျြစတေဲ့ နညျးမြား”
Zawgyi မီးအပူ ၊ ဆီအပူ လောင်တတ်တဲ့ အိမ်ရှင်မတွေအတွက် အမာရွတ်မကျန်စေတဲ့ နည်းများ ( ၁ )ကြက်ဥ ပြုတ်ပီး အကာကိုဖယ်ပါ ။ အနှစ်ကို ဒယ်အိုး သန့်သန့်နဲ့ မီးအပူ ပေးလှော်ပါ ။…